BURMA: [Big Brothers & Sisters] တောင်ငူတွင် အင်အားပြင်း ဗုံးပေါက်ကွဲ .
[Big Brothers & Sisters] တောင်ငူတွင် အင်အားပြင်း ဗုံးပေါက်ကွဲ .
Burma Freedom 29 June 19:12
တောင်ငူတွင် အင်အားပြင်း ဗုံးပေါက်ကွဲ .
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ 29 ရက် 2011 ခုနှစ် ကျော်ခ သတင်း - မဇ္ဈိမသတင်းဌာန .ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)
ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့၌ အင်အားပြင်းထန်သည့် ဗုံးတလုံး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် ပေါက်ကွဲခဲ့သော် လည်းတဦးတ ယောက်မျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိဟုမြို့နယ်အာဏာ ပိုင်များက ပြောဆိုသည်။
ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်း တောင်ငူမြို့ ၂ဝ ရပ်ကွက် မိတ္တဗလလမ်းနှင့် မင်းကြီးညိုလမ်းဒေါင့်ရှိ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်၌ ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အမှတ် ၁ ရဲစခန်းနှင့် မြို့နယ်စည်ပင်က ဆိုသည်။
"ဗုံးကတော့ ချိန်ကိုက်ဗုံးလို့ ယူဆရပါတယ်။ ပြင်းအားကတော့ တော့်တော့ကို ပြင်းပုံရတယ်။ 'ဗုန်း' ဆိုတမြို့ လုံးကို ဟီးသွားတာပဲ။ သတင်းရပြီးသွားကြည့်တော့ မြက်ခင်းပဲ စုတ်ပြတ်သွားတာ အဲဒီနားမှာ အဆောက် အအုံကလည်း ကပ်လျက်မရှိဘူးလေ" ဟု ဗုံးကွဲသည့် နေရာသို့ ကြည့်ရှုခဲ့သည့် မြို့နယ်စည်ပင် သာယာဌာနမှ အရာရှိတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
တောင်ငူခရိုင် ရဲမှူးအပါအဝင် အမှတ် ၁ ရဲစခန်း တာဝန်ကျရဲများက ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့သည့်နေရာသို့သွားရောက် ကာ လမ်းများ ပိတ်ထားလိုက်ပြီး ဗုံးထပ်မံရှိမရှိ စစ်ဆေးနေပြီး မြို့အဝင်အထွက်လမ်းများ၌ ဆိုင်ကယ်နှင့် ကားများကို စစ်ဆေးနေသည်။
လွန်ခဲ့သည့် တပတ်ခန့်ကပင် တောင်ငူမြို့ပေါ်၌ ဧည့်စာရင်း စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် လမ်းမကြီးများပေါ် ဖြတ်သန်း သွားလာနေသည့် ယာဉ်များကို ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
တောင်ငူမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေခပ်ချောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ ၂ အား တနင်္ဂနွေ ည ၈ နာရီမှ နောက်မနက် ၅ နာရီကျော်အထိ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များက လောင်ချာများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ သေးသည်။
ည ၈ နာရီကျော်မှ မနက် ၅ နာရီကျော်ထိ တောင်ငူမြို့ အရှေ့ဘက် ၁၄ မိုင်ခန့်အကွာသောက်ရေခပ်ချောင်း ပေါ်၌ တည်ရှိသော ဆောက်လက်စ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းကို လောင်ချာများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သေး သည်။
သောက်ရေခပ် စက်ရုံ၌ အလုပ်လုပ်နေသော တရုတ်နိုင်ငံသားများနှင့် စီမံကိန်းရှိ မြန်မာ ၁ဝဝဝ ကျော်လည်း ၁၉ ရက်နေ့တွင် တောင်ငူမြို့ထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။
ယင်းပစ်ခတ်မှုကို မည်သည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကမှ ၎င်းတို့ လုပ်ရပ်အဖြစ် ထုတ်မပြောသော်လည်း တောင်ငူမြို့ေ ပါ် အမှတ် ၁ ရဲစခန်း တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတဦးကမူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၏ လက်ချက်ဟု ယူဆကြောင်း မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့များ၌ ဗုံးများ ဆက်တိုက်ပေါက်ခဲ့ရာ လူ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ယင်းပေါက်ကွဲမှုကို လုပ်ဆောင်သည်ဆိုကာ ရဲက လူ ၃ ဦးကို ရှာဖွေနေသည်။
Posted by Freedom Burma at 11:12